Fikradaha Naqshadeynta ee Barta Awooda | Hal-abuurka Online
Fikradaha naqshadeynta ee Power Point
Haddii aad leedahay diiwaanka Office 365 markaas waxay u badan tahay inaad aragtay adeeg cusub markaad sawir ku dhejiso slide (waa inta aad ku xiran tahay internetka). Waxay ku saabsan tahay fikradaha naqshadeynta ee Power Point, qalab aan wax badan laga aqoon. Laakiin waxay noqon kartaa mid aad u xiiso badan.
Haddii aad rabto inaad ogaato waxa ay yihiin fikradaha naqshadeynta ee Power Point, sida loo dhaqaajiyo iyo waxa aad ku samayn karto, ka dibna wax walba ayaan kuu muujin doonaa.
1 Maxay yihiin fikradaha naqshadeynta ee Power Point
2 Waa maxay sababta loogu Isticmaalo Fikradaha Naqshadeynta Goobta Korontada
3 Sida loo dhaqaajiyo fikradaha naqshadeynta
3.1 Talaabooyinka Lagu Hawl-galinayo Fikradaha Nakhshadeynta
3.1.1 Furo barnaamijka PowerPoint
3.1.2 Fur bandhig banaan
3.1.3 Doorashada "Design"
4 Dami fikradaha naqshadeynta
5 Beddelka fikradda naqshadeeyaha
Maxay yihiin fikradaha naqshadeynta ee Power Point
Fikradaha naqshadeynta, Sidoo kale loo yaqaan Fikradaha Naqshadeynta, ama Naqshadeeyaha PowerPoint, ayaa runtii waxtar leh Waxaa bixiyay barnaamijku si uu boodhka uga dhigo mid soo jiidasho leh intii suurtogal ah.
Taas awgeed, markaad geliso qoraalka, sawirada, iwm. duleelka, oo aad dhaqaajiso qalabka, waxa ay ku siin kartaa dhawr fursadood oo aad dib ugu habayn karto waxa ku jira oo aad uga dhigi karto in ay u ekaato muuqaal muuqaal ah, soo jiidasho leh si aad saamayn ugu yeelato.
Dad badan ayaa qaba in, qalab ahaan, naqshaduhu ay isku mid noqon karaan laba qof ama in ka badan, laakiin waa wax la yiraahdo ma dhicin, maadaama talooyinka la soo jeediyay ay yihiin kuwo aan toos ahayn oo ay yar tahay fursadda isku mid ah. Maxaase tan loo sameeyay?
Bal qiyaas slide PowerPoint ah. Sida caadiga ah, waxaad isticmaashaa mid ka mid ah moodooyinka. Laakiin, sidaada oo kale, dad badan ayaa sameeya, iyo dhamaadka in hal-abuurka iyo asalnimada lumay tan iyo, marka ay timaado muujinta, waxay noqon doontaa isku mid ku dhawaad ​​​​dhammaantood. Xaaladdan oo kale, fikradaha naqshadeynta ee Power Point waxay raadiyaan hal-abuurnimo oo ay gaaraan saameyn gebi ahaanba ka duwan.
Waa maxay sababta loogu Isticmaalo Fikradaha Naqshadeynta Goobta Korontada
Haddii isticmaalka qalabkani aanu weli kuu caddayn, mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan waa hal-abuurka aad leedahay, taas oo ah, suurtogalnimada in la yeesho naqshado gaar ah. Sidoo kale, uma baahnid inaad ka fikirto naqshadahaas, ama xitaa dooro template si aad xogta u geliso. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad siiso waxa aad rabto in slide-ku qaado oo wuxuu kuu soo jeedin doonaa fikradaha si aad u doorato midka aad doorbideyso. Xitaa haddii aad rabto inaad wax kale ka beddesho hadhow, waad awoodaa.
Marka la soo koobo, waxaan ka hadleynaa qalab naqshadeysan oo ah Waxay kaa caawinaysaa inaad u soo bandhigto macluumaadka siyaabo kala duwan waxayna kuu ogolaanaysaa inaadan ka welwelin doorashada qaabka, template, si loo abuuro, iwm. Barnaamijku waxaas oo dhan ayuu daryeelayaa.
Sida loo dhaqaajiyo fikradaha naqshadeynta
Haddii aad leedahay PowerPoint oo aad rabto in aad dhaqaajiso fikradaha naqshadaynta ee barnaamijka, marka hore waa inaad ogaataa haddii aad buuxisay shuruudaha sidaas lagu sameeyo. Gaar ahaan, kuwani waa:
Hayso barnaamijka Xafiiska 365 ee sharciga ah, yacni, lama jabsado.
Ku biir barnaamijka. Waxaa loo isticmaali karaa rukhsad la'aan, laakiin tan waxaad u baahan tahay OneDrive ama SharePoint (account firfircoon oo online ah).
Talaabooyinka Lagu Hawl-galinayo Fikradaha Nakhshadeynta
Haddii aad u hoggaansanto kuwa kore waa inaadan wax dhib ah kala kulmin kicinta fikradaha naqshadeynta. Xaaladdan waa inaad samaysaa waxyaabaha soo socda:
Furo barnaamijka PowerPoint
Tani waa wax macquul ah oo waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso. Aad kombayutarkaga, hel barnaamijka oo fur.
Fur bandhig banaan
Waxa ku xiga, marka aad hore u haysatid barnaamijku socdo, waa inaad ku dhufatid bandhigga bannaan, si aad uga shaqeyso "meel xoqan."
Hadda waxaad haysataa shaashadda bannaan oo aad ku dari karto cinwaan iyo qoraal-hoosaad (waxa ay u soo baxaysaa sidaan oo kale). Hagaag, ka hor intaadan wax samayn, waa inaad tagtaa liiska Naqshadda. Ha ka baqin haddii, inay tahay markii ugu horreysay ee aad isticmaasho, ay ku weyddiisato rukhsad si aad fikrado u hesho, guji Activate, wayna diyaar noqon doontaa.
Tani waxay sameyn doontaa Tiir ayaa ka furmaya dhanka midig kaas oo dhigaya Fikradaha Naqshadeynta. Oo halkaas waxaad ka dooran kartaa template ama fikrad in aad jeceshahay.
Maxaa dhacaya haddii aan rabo wax kale?
Waxaa laga yaabaa inaadan rabin slide leh qoraal iyo qoraal keliya, laakiin leh sawir, qoraal, iwm. Sidoo kale. Waxaad ku dari kartaa macluumaadkaas dhib la'aan, oo dib ugu noqo fikradaha naqshadeynta si ay kuu tusaan doorashooyin kala duwan si aad isugu ururiso template-kaaga.
Dami fikradaha naqshadeynta
Waxa kale oo laga yaabaa inay dhacdo inaadan jeclayn fikradaha naqshadaynta, ama inaad door bidayso inaad wax walba keligaa samayso. Haddii aad rabto inaad ka hortagto inay si joogto ah u soo baxaan, waxa fiican inaad damiso.
Si tan loo sameeyo, waa inaad tagtaa Liiska faylka oo halkaas ka raadi "Options".
Liiskaas dhexdiisa, hel midka oranaya "PowerPoint Options." Waa inaad gujisaa "Guud" oo, ku dhawaad ​​dhamaadka, waxaad lahaan doontaa sanduuq firfircooni oo leh "Si toos ah i tus fikradaha naqshadeynta." Kaliya waa inaad damisaa sanduuqaas oo aanad haysan doonin.
Beddelka fikradda naqshadeeyaha
Xaqiiqda ah in fikradaha naqshadeynta ay kaliya u firfircoon yihiin macaamiisha barnaamijka waxay la macno tahay in qaar badan aysan rabin inay isticmaalaan, ama aysan awoodin, taasina waxay muujineysaa inaysan haysan ikhtiyaar. Si kastaba ha ahaatee, waxba run ahaantii ma dhacaan tan iyo markii aad awooddo sii wad isticmaalka qaababka PowerPoint ee caadiga ah ee aan si caadi ah u haysano.
Ama sidoo kale waxay noqon karaan ka raadi intarneedka qaabab PowerPoint bilaash ah, in ay jiraan oo ay mararka qaarkood u qurux badan yihiin sida kuwa qalabkani ina siyo.
Waa run in halkan aad halis u tahay in kuwa kale ay isticmaalaan isla jaantusyo isku mid ah, laakiin haddii aad si fiican u baadho waxaa suurtogal ah inaad hesho qaar ka mid ah fursadaha aan la isticmaalin iyo inay kaa dhigi doonaan inaad abuurto naqshado kala duwan. Ama xitaa waxay u adeegi karaan saldhig si ay wax uga beddelaan (haddii ay oggolaadaan) oo aad hesho qaab-dhismeedkaaga.
Waxaan ula jeedaa, Haddii aad haysato rukunka, waxaad isticmaali kartaa fikradaha naqshadeynta ee Power Point si aad u abuurto sawiradaada adiga oo aan wakhti lumin oo aad dooran halabuur iyo naqshado soo jiidasho leh. Laakiin haddii aadan haysan, waxba ma dhacaan sidoo kale; Waa run in aad u baahan doonto in aad wax yar u hurto si aad u hesho template saxda ah ama qaabka ugu habboon, laakiin natiijadu waxay noqon kartaa mid cajiib ah. Hadda noo sheeg, ma tijaabisay qalabka? Ka warran? Ma u qalantaa is-diiwaangelinta si loo awoodo in la dhaqaajiyo?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Fikradaha naqshadeynta ee Power Point
Waa maxay risography?